रोमी ११ | अनलाइन बाइबल | नयाँ संसार अनुवाद (२०१०)
११ त्यसोभए म सोध्छु, के परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरूलाई त्याग्नुभयो? त्यस्तो कहिल्यै नहोस्! किनभने म पनि अब्राहामको वंशको अनि बिन्यामीन कुलको एक जना इस्राएली हुँ। २ आफूले सबैभन्दा पहिला स्वीकारेका मानिसहरूलाई परमेश्वरले त्याग्नुभएन। एलियाले इस्राएलविरुद्ध परमेश्वरसित गरेको बिन्तीको सन्दर्भमा धर्मशास्त्रमा लेखिएको कुरा के तिमीहरूलाई थाह छैन? ३ “हे यहोवा, तिनीहरूले तपाईंका भविष्यवक्ताहरूलाई मारिसके, तिनीहरूले तपाईंका वेदीहरू भत्काइसके र अब म मात्र बाँकी छु अनि तिनीहरू मेरो ज्यान* लिन खोज्दैछन्‌।” ४ यद्यपि, परमेश्वरले तिनलाई के जवाफ दिनुभयो? “मैले आफ्नो लागि सात हजार यस्ता पुरुषहरू जोगाइराखेको छु, जसले बालको अगाडि घुँडा टेकेका छैनन्‌।” ५ त्यसैगरि अहिले यस वर्तमान समयमा पनि बाँकी रहेका ती मानिसहरू देखा परेका छन्‌, जो परमेश्वरको असीम अनुग्रहले गर्दा चुनिएका हुन्‌। ६ अब यदि यो असीम अनुग्रहले गर्दा भएको हो भने, कामहरूले गर्दा भएको हुनसक्दैन। नत्रता, असीम अनुग्रह असीम अनुग्रह नै हुँदैन। ७ त्यसोभए हामी के भनौं? जुन कुरा इस्राएलले धुइँपत्ता खोजिरहेको छ, त्यो तिनीहरूले पाएनन्‌, तर चुनिएकाहरूले पाए। किनकि बाँकी अरूको चेतना बोधो भएको थियो। ८ जस्तो लेखिएको छ: “परमेश्वरले तिनीहरूलाई गहिरो निद्रामा* पार्नुभएको छ। उहाँले तिनीहरूलाई नदेख्ने आँखा अनि नसुन्ने कान दिनुभएको छ। आजसम्मै तिनीहरू त्यस्तै हालतमा छन्‌।” ९ त्यसैगरि दाऊद यसो भन्छन्‌: “तिनीहरूको भोज* तिनीहरूका लागि फन्दा, धराप, ठेस लाग्ने ढुङ्गा अनि बदला लिने कारण बनोस्। १० तिनीहरूको आँखामा अन्धकार छाइरहोस्, ताकि तिनीहरूले नदेखून्‌ र तिनीहरूको ढाड सधैं कुप्रो भइरहोस्।” ११ तसर्थ म सोध्छु, के तिनीहरूले पूरै पतन हुनेगरि ठेस खाए? त्यस्तो कहिल्यै नहोस्! तर तिनीहरूको गलत कदमले गर्दा अन्यजातिका मानिसहरूले उद्धार पाए र यो देखेर तिनीहरू डाही भए। १२ अब यदि तिनीहरूको गलत कदमले गर्दा संसारले प्रशस्त आशिष्‌ पायो अनि तिनीहरू घटेकोले अन्यजातिका मानिसहरूले प्रशस्त आशिष्‌ पाए भने तिनीहरूको सङ्ख्या पूरा हुँदा झन्‌ कत्ति धेरै आशिष्‌ पाइएला! १३ अब म अन्यजातिका मानिसहरूसित बोल्दैछु। किनकि वास्तवमा म अन्यजातिहरूको प्रेषित हुँ र म आफ्नो सेवाको गौरव बढाउँछु, १४ ताकि मेरो नाता पर्ने मानिसहरूलाई डाही बनाएर तिनीहरूमध्ये केहीलाई कसैगरि बचाउन सकूँ। १५ किनकि यदि तिनीहरूलाई पन्छयाउनुको अर्थ संसारको निम्ति मिलाप हो भने तिनीहरूलाई ग्रहण गर्नुको अर्थ तिनीहरू मृत्युबाट फेरि जीवित हुनुबाहेक अरू के हुन सक्छ र? १६ त्यसैगरि, यदि अगौटे भेटीको रूपमा चढाइएको पीठोको सानो डल्ला पवित्र छ भने पूरै ढिक्का पनि पवित्र छ। अनि यदि जरा पवित्र छ भने हाँगाहरू पनि पवित्र छन्‌। १७ तथापि, केही हाँगाहरू भाँचेपछि, जङ्गली जैतुन भईकन पनि तिमीहरूलाई ती हाँगाहरूमा कलमी गरेर गाभियो र यसरी जैतुनको भरिलो जराको भागीदार भयौ भने १८ ती भाँचिएका हाँगाहरूसामु घमन्ड नगर। तर यदि तिमीहरू हाँगाहरूसामु घमन्ड गर्छौ भने यो कुरा नबिर्स, तिमीहरूले जरालाई होइन तर जराले तिमीहरूलाई थामिरहेको छ। १९ तर तिमीहरूले यसो भनौला: “मेरो कलमी होस् भनेर नै हाँगाहरू भाँचिएका हुन्‌ नि।” २० लौ ठीक छ! विश्वास नभएकोले तिनीहरूलाई भाँचियो तर तिमीचाहिं आफ्नो विश्वासले गर्दा टिकिरहेका छौ। अहङ्कारी हुन छोड, बरु होसियार बस। २१ किनकि परमेश्वरले त्यसको आफ्नै हाँगाहरूलाई त बाँकी राख्नुभएन भने तिमीहरूलाई पनि बाँकी राख्नुहुनेछैन। २२ तसर्थ, परमेश्वरको दया अनि कठोरता दुवैलाई विचार गर। जसको पतन भयो तिनीहरूको निम्ति कठोरता तर तिमीहरूका लागि भने परमेश्वरको दया। तर त्यसका लागि तिमीहरू उहाँको दया पाउन योग्य भइरहनुपर्छ, होइन भने तिमीहरू पनि काटिनेछौ। २३ यदि तिनीहरूले फेरि विश्वास गर्न थाले भने तिनीहरूलाई पनि कलमी गरिनेछ। किनकि परमेश्वरले तिनीहरूलाई फेरि कलमी गर्न सक्नुहुन्छ। २४ यदि तिमीहरूलाई जङ्गली जैतुनको रूखबाट काटेर बगैंचामा उम्रिने जैतुनको रूखमा प्रकृतिको नियमविपरीत कलमी गरेर गाभियो भने तिनीहरू त त्यही जैतुनको रूखका हाँगाहरू हुन्‌, त्यसैले तिनीहरूलाई कलमी गरेर आफ्नै रूखमा गाभ्न झन्‌ कत्ति सजिलो होला! २५ ए भाइहरू हो, आफ्नै नजरमा बुद्धिमान्‌ भएर तिमीहरू यो पवित्र रहस्यबारे अनजान रहो भनी म चाहन्नँ: अन्यजातिका मानिसहरूको सङ्ख्या पूरा नहोउन्जेल इस्राएलको एउटा हिस्साको चेतना साँच्चै बोधो हुँदै गएको हो। २६ अनि यसप्रकार सारा इस्राएलले उद्धार पाउनेछ। जस्तो लेखिएको छ: “सियोनबाट उद्धारक आउनेछ र याकूबबाट दुष्कर्महरू हटाउनेछ। २७ अनि जब म तिनीहरूको पाप हटाउँछु, यही मैले तिनीहरूसित गरेको करार हुनेछ।” २८ हो, जहाँसम्म सुसमाचारको कुरा छ तिनीहरू परमेश्वरका शत्रुहरू हुन्‌ र त्यसले गर्दा तिमीहरूलाई फाइदा पनि भयो तर परमेश्वरको चुनाइको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा, तिनीहरूका पुर्खाहरूसित गरिएको प्रतिज्ञाले गर्दा तिनीहरू परमेश्वरका प्रियहरू हुन्‌। २९ किनकि वरदान दिनुहुँदा वा कसैलाई चुन्नुहुँदा परमेश्वर पछुताउनुहुन्न। ३० कुनै समय तिमीहरू पनि परमेश्वरप्रति अनाज्ञाकारी थियौ तर तिनीहरूको अनाज्ञाकारिताले गर्दा उहाँले अहिले तिमीहरूमाथि कृपा देखाउनुभएको छ। ३१ तिनीहरू अनाज्ञाकारी भएकोले अहिले तिमीहरूले कृपा पायौ, ताकि अब तिनीहरूमाथि पनि कृपा देखाउन सकियोस्। ३२ किनकि तिनीहरू सबैमाथि कृपा देखाउन परमेश्वरले तिनीहरू सबैलाई अनाज्ञाकारिताको कैदी हुन दिनुभयो। ३३ परमेश्वरको सम्पत्ति, बुद्धि अनि ज्ञानको गहिराइ कत्ति अथाह छ! उहाँका न्यायहरू कत्ति अगम अनि उहाँका मार्गहरू कत्ति अपार छन्‌! ३४ किनकि “कसले यहोवाको विचार बुझ्न सकेको छ अथवा को उहाँको सल्लाहकार भएको छ?” ३५ अथवा “कसले उहाँलाई पहिले दिएको हुनाले उहाँले पनि दिनुपर्ने भएको छ?” ३६ किनभने सबै कुरा उहाँबाटै आउँछन्‌, उहाँले गर्दा नै अस्तित्वमा छन्‌ अनि उहाँकै लागि अस्तित्वमा रहन्छन्‌। उहाँले नै सदासर्वदा गौरव पाऊन्‌। आमिन।
^ रोमी ११:३ * ग्रीकमा पुस्खे। अतिरिक्त लेख ७क हेर्नुहोस्।
^ रोमी ११:८ * यसले परमेश्वरको उद्देश्य बुझ्न नसक्नुलाई सङ्केत गर्छ।
^ रोमी ११:९ * शाब्दिक, “टेबुल।”